2 safidy hafa amin'ny Google Play Store | Androidsis
Safidy 2 amin'ny Google Play Store hisintomana ny rindranasa Android
Raha manana terminal Android ianao izay tsy manana ny fametrahana mialoha ny tranombarotra fampiharana Google Android ofisialy, ny Play Store, na te hanandrana fivarotana hafa hafa ho an'ny Android fotsiny ianao, azo antoka fa ho liana amin'ity lahatsoratra ity izay holazainay aminao izahay Safidy 2 amin'ny Google Play Store hisintomana ny rindranasa Android.
Mandalo ny fivarotana fampiharana tsara indrindra ho an'ny Android ao ambadiky ny Google Play, ny Fivarotana Amazon izay efa fantatrao angamba, misy ny mety hafa toa ireo fivarotana roa hafa izay etsy ambany, kitiho fotsiny «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» Hanolotra anao izahay mba hahafahanao mandray azy ireo koa rehefa manapa-kevitra ianao magazay hafa amin'ny Google Play Store.
1 Safidy 1: Getjar
2 Alternative faha-2: Manintona
Safidy 1: Getjar
Ny voalohany amin'ireo safidy hafa tianay haseho anao anio dia mamaly ny anaran'ny Getjar, fivarotana fampiharana miaraka amin'i fampiharana 400.000 mahery, izay manana fahaleovan-tena tanteraka avy amin'i Google ary avy amin'izy ireo ny fampiharana tsara indrindra ho an'ny terminal Android dia atoro antsika isan'andro.
Una magazay hafa amin'ny Google Play Store Izy io dia misy fizarana toa ny Fampiharana finday avo lenta, sokajy, fampiharana vaovao ary fampiharana tianao indrindra.
Mampiditra ny Getjar, ity safidy hafa amin'ny Google Play Store, vitantsika io fipihana io rohy io ihany avy amin'ny solosaina manokana, na avy amin'ity iray hafa ity raha mamaky an'ity lahatsoratra ity amin'ny terminal finday Android ianao.
Alternative faha-2: Manintona
Manintona no faharoa safidy hafa amin'ny Google Play Store fa anio izahay dia te-hanoro amin'ny Androidsis fivarotana fampiharana tsy miankina mankany amin'ny Google Play Store izay ankoatry ny fitadiavana fampiharana izay ao amin'ny fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android, dia afaka mahita ihany koa ireo rindranasa izay tsy hita ao amin'ny Google store find noho ny antony izay tsy handehanantsika amin'izao raharaha izao.
Ny fahasamihafana lehibe indrindra azontsika jerena Manintona amin'ny fanajana ny Getjar dia izany koa, raha manana terminal Apple isika, na iPhone, iPad na iPod Touch misy jailbreak, dia hahita faritra iray natokana ihany koa amin'ny fampidinana ireo rindranasa zanatany ho an'ireo terminal ireo miaraka amin'ny rafitra fiasa iOS.
Midira amin'ny fivarotana Manintona ary manana fidirana amin'ireo rindranasa rehetra natolotra eo aminy, fotsiny tsy maintsy tsindrio ity rohy ity ihany.
Raha izay tadiavinao dia safidy hafa amin'ny Play Store toa ny Amazon Store, Apptoide na Blackmarkt, dia manoro hevitra anao aho mandalo ity lahatsoratra nosoratako taloha ity ianao izay anolorako ireto magazay hafa ireto amin'ny Google Play Store ary omenay anao koa ny rohy fampidinana an'ireo fivarotana ireo amin'ny endrika apk ho fametrahana tanana amin'ny terminal Android-nao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Safidy 2 amin'ny Google Play Store hisintomana ny rindranasa Android
josepolanco dia hoy izy:
Mamaly an'i josepolanco
Diana Asprilla dia hoy izy:
Te hamorona instagran-ko aho
Valiny amin'i Diana Asprilla
[APK] Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny maody fanarenana amin'ny fomba mora indrindra
Raiso ny fampandrenesana ao amin'ny bara misy ny Android Lollipop miaraka amin'i Ticklr